Kutaa magaala Booleetti namoonni saamicha raawwachuf socha’an too’ataman – Fana Broadcasting Corporate
Kutaa magaala Booleetti namoonni saamicha raawwachuf socha’an too’ataman
Finfinnee, Mudde 25,2011(FBC)-Finfinnee Kutaa magaala Booleetti namoonni meeshaa waraanan deeggaramuun saamicha raawwachuf socha’an too’anno jala ooluu Komishiniin Poolisii magaalichaa beeksise.
Komishinichi shakkamtoota 24 ta’an,walakeessaa halkan kaleessatti barii konkolaataa lakkoofsa gabatee 30212 OR ta’ee saamicha raawwachuuf osoo socha’aa jiranuu too’annoo jala oolchuu ibseera.
Shakkamtootni kunneenis eeruu hawaasa irraa argameen kutaa magaala Boolee naannoo Sammiit Hoteela Seentaraal jedhamutti hordoffii poolisiin taasiseen qabaman.
Shakkamtootni kun yeroo qabamanitti Shugguxiin tokko rasaasa 8 waliin,ibsaa paawusaa 2,murtuu sibila fi kanneen biro qabamuu Itti Gaafatamaan buufata poolisii naannawa Sammiit Komaandar Kaasahuun Xilaahun ibsaniiru.
Ammatti poolisiin shakkamtoota kanneen irratti qorannoo gaggeessaa jiraachuu kan ibsan Komaandar Kaasahuun,kanaan duras shakkamtootni biroo funyoo eleektirikaa ijaarsa manneen waliinif oolan hatuun too’annoo jala jiraachuu eeraniiru.